Torolalana famakiana ny tatitra ataon’ny fitsarana momba ny kaonty mikasika ny volavolan-dalàna fandravonana « loi de règlement » no votoatin’ny Atrikasa izay nokarakarain’ny PAGI ary notarihan’ny filohan’ny fitsarana momba ny kaonty Andriamatoa Andriambolarinirina Arison Jean Noël.
Izao no natao dia mba ho fanampiana ny mpikambana eo anivon’ny parlemanta amin’ny fandaniana ny lalàna momba ny tetibola amin’izao fivoriana ara-potoana faharoa izao, satria efa nisy ny fankatoavana ity torolalana ity tamin’ny fivoriana ara-potoana voalohany ary koa hifanazavana sy hifanakalozan-kevitra mba hisian’ny fiaraha-miasa matotra sy maharitra amin’ny fitsarana momba ny kaonty sy ny antenimiera roa tonta. Ny tanjona kendrena dia ny hampahomby ny fandaniana ny tetibola fandravonana satria io no ahafahana manao jery todika sy mamaritra ny fandaniana natao sy manamarina ny vokatra azo. Ity torolalana ity dia fitaovana ahafahana manao fanitsiana hahatongavana amin’ny tetibola metimety kokoa. Marihana fa mbola hisitraka an’ity atrikasa ity koa ny Antenimieram-pirenena Malagasy ao aoriana kely ao.